ညီလင်းသစ်: အတွင်း ၃၇၊ အပြင် ၃၇
Posted by ညီလင်းသစ် au 17.2.12
Happy Birthday ပါ ကိုညီလင်းရေ...
ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ
မိသားစုနံ့ အတူတူ သွားမယ့် ခရီးလမ်းလည်း ပျော်စရာ ကောင်းပါစေ... အားလုံး အစစ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်နော်...း)
Happy Birthday အစ်ကို.. ညီမမွေးနေ့က မနက်ဖြန်။ ၁၈ရက်နေ့။ :)
Happy birthday brother, May God be with you and bless you forever!
ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ...ကိုညီလင်းသစ်..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မွေးနေ့ရက်စွဲခြင်းလာတူနေတယ် ညီမက 17 မတ်လမွေးတာ နှစ်လဲတူတူပဲ ကိုညီလင်းသစ်က တစ်လတိတိအသက်ပိုကြီးတယ် ...။
Happy Birthday par Ko Nyi
ံHappy Birthday Ko nyi !
Haveanice and save trip bro!
ကိုညီလင်းသစ်ကို ၃၇ လောက်ရှိပြီလို့
ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ..း))
Happy Birthday နော့် အစ်ကိုး))
HAPPY BIRTHDAY LITTLE BRO!!!!
I just thought yesterday that you're going to celebrate your B'day with old friends and family overthere.I'm also counting days to be there:)
Happy Birthday Ko Nyi..
Happy Birthday ကိုညီလင်းသစ်ရေ...
ပျော်ရွင် ကျန်းမာ ချမ်းသာ နိုင်ပါစေ...
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုညီလင်းရေ ... ။
ခရီးလမ်းပမ်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့ သာယာပါစေ ... ။
မိသားစု ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များကို အတူလျှောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေ ... ။
Happy Birthday ကိုညီလင်း။ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ မိသားစုလေးနဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းပါစေရှင်။ ဒါနဲ့ မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်ဖြစ်တာလားဟင်။
စိတ်ချလက်ချသာ သွားပါ။ အိမ်ဇောက်ထိုးလာလုပ်ထားလိုက်မယ်း)))
ပျော်ရွှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောမွေးနေ့မှာ ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဆင်နွှဲခွင့်ရတာ မတောင်းဘဲနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဆုတစ်ခုပါပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ဟက်ပီး ၃၇ ပါ။း))
ပီ.အက်. မြန်မာပြည် ၁လခရီးလောက် အလည်ပြန်မလို့ထင်တယ်။း)
Happy Birthday ပါအကို
ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ ကိုညီလင်းသစ်
မိသားစုနှင့် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့..
မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ကို ဆင်နွဲနိုင်ပါစေ ကိုညီလင်းသစ်ရေ...
ခရီးသွားတယ်ဆိုတော့ ပြန်လာရင် အတွေ့အကြုံတွေ ပါလာဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
အစစအဆင်ပြေသော၊ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသော ခရီးဖြစ်ပါစေရှင်..
ပျော်ရွင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာ ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ အကို.... မိသားစုနဲ့ မွေးနေ့ဆင်နွဲရင်း တစ်သက်လုံး အမှတ်တရ ဖြစ်စေမယ့် အမှတ်တရတွေ များများ ယူခဲ့နော် အကို...:):)
ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ အကို...။
Happy Birthday ပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ...
မွေးနေ့ ကိတ်မစားရတော့ပြန်လာမှမြန်မာပြည်ကမုန့် တွေကျွေးနော်။း)
ခရီးလမ်းပန်းချောမွေ့ ပါစေ။ မိသားစုအားလုံးကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါလို့ ..
Happy Birthday ကိုညီ..မွေးနေ့ မှသည် မိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စွာ စာတွေအများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ..Haveanice trip..ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ခဲ့နော့..
Happy Birthday ပါအစ်ကို...
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ကိုညီလင်းသစ်.. အခုချိန်ဆို နောက်ကျသွားပြီလား.. ၁၇ ရက်ကို ကျော်သွားပြီလား... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ..
Happy Birthday Ko nyi.:)
Bon Anniversaire en retard. J'espere vous avez passé une merveilleuse journee d'anniversaire!
ညီလင်းရေ ... မွေးနေ့ဆုတောင်းနောက်ကျတဲ့အတွက် ဆောရီးပါ...။
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ အများဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် နှစ်သစ်တခု ညီလင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ ..... ။
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး နတ်ပွဲအကြောင်းများလားလို့ လက်စသတ်တော့ မွေးနေ့ပွဲဖြစ်နေတာကိုး..။
အို...ငယ်ပါသေးတယ်... အခုမှ ၃၇ ရှိသေးတာ... :P
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ခရီး ဖြစ်ပါစေရှင်...။
မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းဖြင့် ဆထက်တိုး စာတွေ အများကြီး အားကြီး ရေးနိုင်ပါစေလို့...။
( ပြန်လာရင် ခရီးသွားပို့စ် ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် :)
အားနာလိုက်တာဗျာ။ ဒီနေ့မှ ရောက်ဖြစ်တယ်။ နောက်ကျဆုတောင်းလေးကိုပဲ လက်ခံပေးပါ။
“ ချစ်သော မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝတစ်လျှောက် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သာယာပါစေဗျာ”
ပို့စ်အသစ် တင်ပါဦးဗျို့ .. စီဘောက်စ်မှာ ရေးမရလို့ ဒီမှာကော်မန့်လာပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ပျောက်နေတာကြာလို့ လာကြည့်တာပါ။ နေကောင်းရဲ့လား။
inside 37 out side 37 total 101 pot ;))
Happy belated Birthday မောင်ညီလင်းရေ။
မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ၁၇ရက်ကနေ ၂၇ရက်နေ့အထိ
တီတင့် ရိပ်သာ(၁၀)ရက် ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်မသိလိုက်ဘူး
ရော်..တိုက်တုိုက်ဆုိုင်ဆိုင်ကိုယ့်ကွန်မန့် ပြန်လာဖတ်တော့ 37 comments တဲ့။ ဒီတော့ဒီစာကုိုသတင်းစာအချပ်ပိုလိုမျိုးကွန်မန့် အပိုလို့ သတ်မှတ်ပြီးထားလိုက်တော့နော။ နုို့ မို့ ရင် 38comments ဖြစ်တော့မှာလေ။
39 comments ဖြစ်ဖို့ လာခဲ့ပါတယ်ရှင်
ရက်ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြည်လင်အေးချမ်းနိုင်ပါစေနော်..။